Waa kuwee todobada ciyaaryahan ee laadadka xorta ah (Free-kicks) ku dhaliyey 10 gool iyo wax ka badan horyaalka Premier League? – Gool FM
Waa kuwee todobada ciyaaryahan ee laadadka xorta ah (Free-kicks) ku dhaliyey 10 gool iyo wax ka badan horyaalka Premier League?
(England) 10 Nof 2016 – Ciyaaryahan waliba oo kubadda cagta ciyaara waxa uu leeyahay taariikh ama rikoodh u diiwaan gashan, haddaba waxaan kuu soo gudbinaynaa 7 ciyaaryahan oo laadadka xorta ah, bulusoon toos ah (Free-kicks) ku dhaliyey 10 gool iyo wax ka badan horyaalka Premier League.
Xiddigahaas todobada ah ee laadadka xorta ah 10 gool iyo wax ka sarreeya kaga dhaliyey horyaalka Premier League, waxaa hoggaaminaya laacibkii laadadka xorta ah caanka ku ahaa ee kooxda Manchester United iyo xulka qaranka England ee David Beckham kaasoo 15 bulusoon toos ah gool ka dhaliyey EPL.
Halyeygii hore ee kooxda Arsenal ee Thierry Henry iyo weeraryahankii hore ee kooxda Chelsea ee Gianfranco Zola ayaa ku wada jira kaalinta labaad kuwaasoo min 12 jeer laadadka xorta ah ee tooska gool kaga dhaliyey horyaalka Premier League.
Haddaba halkaan hoose ka eeg todobada ciyaaryahan ee laadadka xorta ah (Free-kicks) ku dhaliyey 10 gool iyo wax ka badan horyaalka Premier League:-
Beckham – 15
Ronaldo – 11
Larsson – 11
Pedersen – 10
"Ronaldo ayaa u qalma Ballon d'Or" - sidaa waxaa qaba Dani Carvajal